Ukurhweba ngeendaba ze forex - Forex Trend Wave
Ekhaya » Forex Trading Basics » Ukurhweba ngeendaba ze forex
Isilimela 21, 2020 Umbhali kaTom Off Forex Trading Basics,
Iindaba ngakumbi ze-USD zinokuchaphazela uninzi lwamaxabiso njengoko iyimali yogcino lwehlabathi enepesenti enkulu yazo zonke iimali zorhwebo lwemali yangaphandle. Xa ukurhweba kubalulekile ukuba ukhethe izibini zemali ezilinganiselweyo kwaye uyazi iziphumo zoqoqosho lwemali oyikhethileyo.. Ingqwalasela ebalulekileyo yindlela isiganeko esithelekiswa ngayo noqikelelo ngabahlalutyi abahlukeneyo.
Iindaba ezidlula uqikelelo lomhlalutyi ziya kwandisa ixabiso lemali. Iimali ezincinci kunye nezingaqhelekanga zinokuhamba ngobundlobongela ngokusekelwe kuzo zonke iindaba.
Iimali zemveliso, njenge-AUD(Idola yaseOstreliya) kunye ne-cad (Idola yaseKhanada), inokusabela kumaxabiso kwiimarike zorhwebo. Ngezantsi zizinye zeendaba ezinokuvelisa amaxabiso otshintshiselwano.
Ngezantsi zimbalwa iindaba ze-forex ezihambisa imarike…
Isalathiso seXabiso loMthengi
Ukunyuka kwamaxabiso kuthetha ukuba inzala ephezulu
Unyulo jikelele – Unyulo lunokumisela imigaqo-nkqubo yezoqoqosho yexesha elizayo
Ibhalansi yorhwebo – intsilelo enkulu yorhwebo imbi kwimali
Iintlanganiso zeFederal Reserve – Isibhengezo seRhafu yoTshintsho
NFP – Umvuzo ongengowaseFama – Unjani umfanekiso wangoku wengqesho
Umvuzo ongengowaseFama (NFP)
I-NFP yenye yeendaba ezinkulu kwi-Forex ebangela utshintsho olubalulekileyo kwimarike ye-forex. Idla ngokupapashwa ngoLwesihlanu wokuqala wenyanga nganye.
I-NFP luqikelelo olwenziwe nguMphathiswa wezaBasebenzi lokukhula kwengqesho kumacandelo karhulumente nawabucala. Sisikhombisi esikhokelayo kwaye sinceda ukuqikelela umkhombandlela wekamva loqoqosho. Ukuthethathethana ne-NFP kunokuba nzima kakhulu, njengoko amaxabiso aya kunyuka ngokukhawuleza emva kokubhengezwa kweendaba.
Ingxelo ye-NFP yase-US ihlanganiswe yi-Bureau of Labor Statistics karhulumente wase-United States. Iqulethe ulwazi olukhoyo ngoku olungelulo lwezolimo (ishishini) ingqesho eUnited States kwaye isetyenziselwa ukunceda ukuqikelela iimeko zekamva ngokunxulumene noqoqosho lwelizwe. Ingena emoyeni 8:30 a.m. EST ngoLwesihlanu wokuqala wenyanga nganye. Ngamanye amaxesha inokupapashwa ngoLwesihlanu wesibini enyangeni, hayi eyokuqala.
Iimeko zorhwebo emva kokukhululwa
Xa ingxelo yeNFP ipapashwa, ixabiso kwi currency pairs ezichaphazelekayo ngokuqhelekileyo amava into leyo, ngolwimi lwabarhwebi, ibizwa “incopho”. Oku kuthetha ukuba kukho ukunyuka okubukhali ngokukhawuleza okanye ukuhla kwexabiso lesibini semali. Olu tshintsho lukhulu lwexabiso yinto ebangela umdla kubathengisi kwihlabathi jikelele.
Ukuqwalaselwa komgca wegrafu kwigrafu xa kusungulwa i-NFP kuya kubonisa ukuba endaweni yomgca othe tye okanye wediagonal., kukho umgca othe nkqo omele impendulo ekhawulezileyo neqhelekileyo yemarike phakathi kwabo barhweba ngeemali ezichaphazelekayo..
Ihamba ngokukhawuleza kangakanani?
Ngelixa ukuphefumla okumisiweyo kunye nokuqhwanyaza okuthintelweyo akuyomfuneko, imarike xa kuphehlelela NFP ngenene ukuhamba ngesantya engakholelekiyo. Akuqhelekanga ukuba incopho ifikelele kuluhlu oluphezulu ngaphakathi 10 ukuya 30 imizuzwana phambi kokubuyela umva. Nangona kukho intshukumo yangaphambili, eyona ntshukumo icacileyo iya kwenzeka kwimizuzwana embalwa yokusungulwa kwengxelo ye-NFP.
Eyona ntshukumo inenzuzo ibandakanya iincopho zendlela enye. Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, ixabiso liya kubandezeleka kwinto ebizwa ngokuba yi-a “band saw”, yiyo i, ukuhamba indlela imizuzwana embalwa kwaye emva koko ubuyele ngokukhawuleza kumgama omkhulu kwelinye icala. Oku kuyabhida kwaye kuwisa abathengisi abaninzi.
Ukufumana inzuzo kwi-NFP
Wonke umrhwebi kufuneka ahlole ikhalenda yeendaba ze-forex yonke imihla. Ungaze uqalise intengiselwano xa isaziso sethenda sipapashwa. Ukuthi ngqo, ukubhengeza i-NFP ngolwesiHlanu wokuqala wenyanga nganye kunokuba nefuthe elimangalisayo lamaxabiso. Amaxabiso anokuguquguquka ngamandla kwicala elinye, uze ujike ikhosi ngemizuzwana.
Ngezantsi kukho iingongoma ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe nazo.
– Zilungiselele iindaba
Yima phambi kokuba iindaba zipapashwe. Kufuneka uthathele ingqalelo uqikelelo lwangoku lweendaba. Ngumahluko nje phakathi kweendaba kunye noqikelelo olubalulekileyo. Inani lokwenyani elingcono kunemarike liya kwenza ukuba imarike inyuke.
Ungathumela umyalelo wemarike okanye umyalelo wokukhawulela ukuqala ukurhweba. Kufuneka uqaphele ukuseta ixabiso lokugqibela kuyo nayiphi na ilahleko kunye nomda wokukhawulela ukufumana nayiphi na inzuzo enokwenzeka. Amaxabiso anokwahluka ngobundlobongela xa iindaba ziphuma. Kubalulekile ukuba wenze inzuzo kwaye unciphise nayiphi na ilahleko nangaliphi na ixesha.
– Qaphela amanqaku okudibanisa
Njengoko amaxabiso enyuka okanye ehla, bakholisa ukwenza amanqanaba okuzinzisa njengonxantathu. Amaxabiso ngokubanzi athanda ukuhamba kwicala lotshintsho lwexabiso lokuqala. Kufuneka ubeke umyalelo ophantsi okanye ophezulu kwinqanaba lokuhlanganisa (indlela ocinga ukuba imakethi iya kuvela).
Emva kokuba umyalelo uqalisiwe, kufuneka uchaze ukumisa / inqanaba lelahleko njengobude bemodeli yokuqinisa yoqobo.
Isalathisi sexabiso lokuthenga
Eli nani luqikelelo ngokuthenga abaphathi bexesha elizayo lomsebenzi wokuvelisa. Eli nani lipapashwe liZiko loLawulo lweeNtengo. Oku kunokuba luphawu olubalulekileyo kwiinzame zokubala umkhombandlela wekamva loqoqosho. Ukuba umsebenzi wezoqoqosho uyacotha ngexesha elithile, abahwebi baya kujonga utshintsho kwi-index yexabiso lokuthenga njengesalathisi sokuqala sotshintsho kwi-fortunes yomsebenzi wezoqoqosho.
Ngelixa uhlala ekhaya ngeli xesha lobhubhane, kubalulekile ukuba uthathe isakhono kunye nesixhobo indlela entsha yokwenza imali ekhaya.
Abarhwebi abaninzi bayaphumelela kulo mdlalo kanye ngenyanga, abanye bakhetha ukurhweba i-FOREX kuphela ngeli xesha. Njengalo naliphi na ishishini eliyingozi, isiseko semfundo esaneleyo kunye nezicwangciso eziliqili zibalulekile. Njengomqali, unokuhlala ufunda kwaye ufunde esi siganeko kwimarike ye-forex kwaye ufike kuyo. Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuba kuguquguquka kakhulu ukurhweba, unokuhlala utyala imali kunye nomthengisi onamava.
Iithegi: Forex, iindaba ze forex, nfp, intlawulo engeyiyo efama, urhwebo lwe forex, iindaba zokurhweba ze forex
Ngaphambili: Iqela le-Euro: AmaJamani afuna iMarshall yeminyaka esixhenxe’ isicwangciso
Okulandelayo: Isicwangciso esilungileyo sorhwebo lwe forex – Isenzo sexabiso
Akukho nto ifana neyona ndlela yokurhweba- ngelixa inkqubo yokurhweba inokuba iphelele kuwe; isenokungasebenzi nabanye abarhwebi. I...